Orinasa sy mpamatsy China Vibro Core | BAOTE
Masinina fantsom-panafody mahery vaika
Masinina Peeling malalaka
Kitapo fanenomana beton
Ny masinina Vibro-core dia manome ny mpamokatra rafi-pamokarana avo lenta sy avo lenta mba hamokarana vokatra sy endrika toy ny fantsom-pitrandrahana sy manholes misy savaivony
Mahatratra 4.000 mm.
Famokarana fantsona nohamafisina sy tsy nohamafisina
Ny fantsom-pifandraisana Rcc dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena rehetra:
elliptical, andohalambo, boribory, talohan'ny fandriana, fantsona jacking ary fantsom-piarovan-tsipika fiarovana PVC, fitoeram-bokatra SY manholevokatra. Kavina faratampon'ny vy, lela sy làlan-drivotra, gasket profile, voafintina O-Ring
liner (PVC, GFR, HDPE,…)
fantsona toradroa / mahitsizoro (Box Culverts) hatramin'ny 3.000 x 3.000 mm (refy anatiny)
Special fantsona miampita, toy ny elliptical na andohalambo miendrika na fantsona misy maina ny halavan'ny toetr'andro dia hatramin'ny 4000 mm
Ny fitaovana dia alefa ao anaty hopper mihazona boribory natao hampihenana ny fametahana. Ny hopper miendrika boribory dia manome safidy marokoroko maromaro tsy ijerena ny toeran'ny mpampita. Ny hopper dia manana fitaovana mpanetsiketsika entin'ny rivotra mba hanafoanana ny tetezana sy hanatsarana ny fikorianan'ny fitaovana. Ny vavahady diovina dia tafiditra ao aorian'ilay hopper.
Assembly of Conveyor
Ny beton dia mandeha amin'ny lohan'ny fizarana amin'ny fehikibo conveyor contoured contoured troughing conveyor natao mba hitaterana fitaovana bebe kokoa tsy misy fatiantoka.
Chute fizarana fitaovana
Ny chute fizarana fitaovana tsy misy fangarony, izay mihodina amin'ny lafiny roa, dia manome antoka ny fivezivezena maimaimpoana fitaovana mivantana ao anaty endrika napetraka. Mihena ny spillage, toy izany koa ny fotoana fanadiovana sy fikojakojana. Ny fantsom-pifandraisana amin'ny faran'ny chute dia manaraka ny contour na ny endrika vokatra ho an'ny fametrahana beton.
Fivoriamben'ny toeran'ny cap
Ny fivorian'ny patanty misy patanty dia manindry ny peratra lohan-doha ambony ao anaty simenitra ho an'ny fametahana ambony indrindra ny spigot, manala ny filana fivorian'ny presshead manokana isaky ny habeny. Ny fivoriambe dia apetaka amin'ny endrika ho an'ny tsipika fototra, na ao amin'ny fotony ho an'ny endriny.
Mekanisma mifototra sy mitokana
Varingarin'i Core Lift
Ny varingarin'ny fantsom-pandrefesana Hydraulika isaky ny gara dia manampy ny crane tetezana rehefa manala ny fotony sy ny fantsona amin'ny endrika amin'ny alàlan'ny fanampiana handresena ny fifamatorana eo amin'ny vokatra sy ny endrika. Mampihena ny fepetra takian'ny crane tetezana izany.
Tongotra azo sintomina
Tongotra azo averina amin'ny pneumatika amin'ny tongotra hidin-trano ao ambanin'ny paleta mba hitondra ny paleta sy ny tranokala manamafy ny masinina. Ny tongotra ihany koa dia manohana ny fantsom-pandefasana fantsom-bokatra efa vita ary ampitaina amin'ny faritra fanasitranana.
Ny crane jib karazana mpandeha an-tany iray dia omena isaky ny toerana hametrahana lohateny ho endrika.
Ny vibrator elektrika mihodina mahomby amin'ny angovo dia mampiditra bearings roller izay manolotra fahombiazana miavaka sy elanelana lava lube ho an'ny fikojakojana ambany sy fiainana lava. Ny lanjan'ny eccentric azo ovaina dia mamela ny fanitsiana ny hery ho an'ny fifehezana matevina.
Teo aloha: Masinina mihombo amin'ny vala
Manaraka: Fako vita amin'ny vy
Masinina mihombo amin'ny vala
Masinina Sodina Pipe, Bolt firafitra, Lag Bolts, Hex Bolts, Bolts amin'ny kalesy, U Bolts,